နေအိမ် » တိုက်ပွဲတွေ » Naruto Vs Goku Fighting
ဂိမ်းသတင်းအချက်အလက်များ: Naruto Vs Goku Fighting
ဖေါ်ပြချက်: အချိန်အာကာသပုံပျက်, Naruto နဂါးရှာတွေ့ဖို့ dragonball World သို့ရောက်ကြ၏။ Naruto ကျောမူရင်းကမ္ဘာကိုသွားကြဖို့အားလုံး Boss ကိုဆင်းရိုက်ကိုကူညီပေးပါ။
ထိန်းချုပ်ရေး: Check inside the game for instructions on how to play.
ကစား: 79,045 tag ကို: Naruto, Naruto ဂိမ်းတွေ, နဂါးဘောလုံး, နဂါး Ball ကိုဂိမ်းများ, နဂါးဘောလုံး, နဂါးဘောလုံးအားကစားပြိုင်ပွဲ, goku, goku ဂိမ်း, နဂါးဘောလုံးကို z, သား goku, နဂါးဘောလုံးကိုတိုက်ပွဲများ
နဂါးဘောလုံးကို z မိုက်သောနေ့၌
ဟယ်လိုဝင်းအတွင်းတွင်နဂါးမြို့တော်ကိုတိုက်ခိုက်, သငျသညျ Goku အားလုံးနဂါးဖျက်ဆီးအားဖြင့်ထိုမြို့ကိုကယ်တင်ပါကူညီသင်တို့အဘို့အခက်ခဲများနှင့်ကစားအများအပြားကွဲပြားခြားနားတဲ့အဆင့်ဆင့်ရှိပါတယ်
flappy goku ဂိမ်း
Flappy Goku ဂိမ်း Play! အဆိုပါရယ်စရာဂိမ်း Flappy Bird ကိုတူ၏!